देशप्रेमी भावना व्यवहारमा देखाऊ
विमला अधिकारी - ‍क्याम्पसी ड्रेसमा साथीसँग रम्मिदै बाग्मती किनारको छेऊमा एक हातले नाक थुन्दै हातको रित्तिएका लेज र रेड बुलका बोतल खोलामा फाल्दै ऊ बढो प्रकृतिप्रेमी पारामा भन्छ सरकारले बाग्मती सफा गरेन। जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्ने भने झै चटपटे र पानीपुरी दिने दाईलाई ऊ हेपाइको शैलीमा भै’या पुकार्छ अनि बढो देशप्रेमी पारामा भन्छ सरकारले सीमा सुरक्षा गरेन। लामो लाईन कुर्न नसकेर नेता र मन्त्रीको सोर्स लाउँदै कर्मचारीलाई घुस दिँदै ऊ आफ्नो काम चाँडो निम्त्याउँछ र कानुन पालक झै भन्छ देशमा कानुन व्यवस्थै भएन।
दुर्गा दाहाल आचार्य - उठ उठ साथीहरू नयाँ बिहान छाइसक्यो नयाँ काम सुरू गर्न नयाँ वर्ष आइसक्यो। नबलेका चुल्होहरु बाल्नेगरी आएको छ । च्यात्तिएको मनहरु टाल्नेगरी आएको छ । नयाँ सालमा बिहानिको सूर्य किरण छाइसक्यो। नयाँ काम सुरू गर्न नयाँ बर्ष आइ...
विजय लामा - ‘के बस्नु यस्तो देश मा जुन देश मा नेताहरुले राष्ट्रिय ध्वजाको कदर गर्न जान्दैनन्। धिक्कार्छु आफ्नो कर्मलाई यस्तो अवस्था आउँदा पनि केही गर्न नसक्दा। कहिलेसम्म हेर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू? कहिलेसम्म सहनुपर्छ हामीले यो सबै पीडाहरू? राष्ट्र र नेपालीहरूलाई माया गर्ने नेताहरू कहिले आउलान्? नेताहरूले जे गरेपनि ठीक त?
सुरेश बादल - म त्यही नाक चुच्चे हुँ जनै भिरेर टुपी पाल्ने पहाडिया बाहुन हुँ।